हाग्गै, जकरियाह, मलाकी – Word of Truth, Nepal
हाग्गै, जकरियाह, मलाकी
February 5, 2020 /in पुरानो नियमका पुस्तकहरू /by Pradesh Shrestha
हामी पुरानो नियमका पुस्तकहरूको अध्ययन क्रमको झण्डै अन्त्यतिर आइसकेका छौं। हाम्रो अध्ययन क्रममा हामीले ३६ ओटा पुस्तकहरू अध्ययन गरिसकेका छौं। केवल तीनओटा पुस्तकहरू बाँकी छन्: हाग्गै, जकरियाह, मलाकी। यी तीनओटै पुस्तकहरू बेबिलोनी कैद पछाडि लेखिएका हुन् (निर्वासन पछाडि-अध्याय ९ हेर्नुहोस्)।
पुरानो नियमका अन्तिम ऐतिहासीक पुस्तकहरू यी हुन्
पुरानो नियमका अन्तिम अगमवाणीका पुस्तकहरू यी हुन्:
यी ६ ओटै पुस्तकहरू बेबिलोनी कैद पश्चात लेखिएको हो।
हाग्गै र जकरियाहको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी
(यहूदीहरूलाई मन्दिरमा कार्य गर्न पुन: फर्काउनु)
तपाईंले हाग्गैको बारेमा बिचार गर्नुहुँदा जकरियाहको बारेमा पनि सोच्नुहोस्, र जकरियाको बारेमा बिचार गर्दा हाग्गैको बारेमा पनि सोच्नुहोस्। यी दुवै व्यक्तिहरू एकसाथ उल्लेख गरिएका छन् (एज्रा ५:१ र ६:१४ पढ्नुहोस्)। उनीहरू इतिहासको एउटै समयका हुन् र उनीहरूले एउटै समूहका मानिसहरूलाई आ-आफ्नो सन्देश प्रदान गरे। उनीहरूको उद्देश्य पनि एउटै थियो, यहूदी मानिसहरूलाई मन्दिर (येरुशलेममा परमेश्वरको निवास्थान) निर्माणको महान् कार्यलाई पूर्णता दिन उत्साह दिनु।
यस समयावधिको इतिहासको बारेमा हामीले एज्राको पुस्तक अध्ययन गर्दाहुँदि बिचार गरिसक्यौं (अध्याय ६ हेर्नुहोस्)। बेबिलोनी कैद पश्चात के भएको थियो भनी एकछिन पुनर्सम्झना गरौं।
बेबिलोनी कैदको ७० वर्षपछि, परमेश्वरले फारसका राजाको आत्मालाई उत्तेजित पार्नुभयो र ती राजाले यहूदीहरूलाई उनीहरूको गृहभूमीमा फर्कने अनुमति दिए। ती राजाको नाम के थियो (एज्रा १ अध्याय)? ____________ करिब ५०,००० यहूदीहरू (एज्रा २:६४-६५) जरूबाबेल (राज्यपाल) र येशूअ अथवा यहोशूको (मूख्य पूजाहारी) अगुवाइमा फर्किए। यहूदीहरूको यो सङ्ख्या ठूलो थिएन (अध्याय ६ हेर्नुहोस्)। यो त केवल सानो भाग मात्र थियो। एकसमय त्यस भूमीमा बसोबास गरेका ठूलो सङ्ख्याको यहूदीहरूको तुलनामा यो त एकदम न्यून सङ्ख्या थियो।
जब यहूदीहरूको यो सानो बाँकी रहेको भाग येरूशलेम फर्किए, उनीहरूले ध्वस्त अवस्थामा रहेको शहर र मन्दिर भेट्टाए। सुलेमानको महान् मन्दिर बेबिलोनीहरूद्वारा नष्ट गरिएको थियो अनि खरानी र ढुङ्गाका थाकहरू बाहेक केही बाँकी थिएनन् (२ इतिहास ३६:१९)। जब ती यहूदीहरू आफ्नो पिताहरूका भूमीमा फर्किए, मन्दिरको पुनर्निमाण गर्नु नै उनीहरूको पहिलो काम थियो। उनीहरू निकै थोरै थिए र उनीहरूको जिम्मेवारी निकै ठूलो थियो! उनीहरू साना थिए तर उनीहरूको जिम्मेवारी विशाल थियो। त्यो काम कसरी गर्न सकिन्थ्यो? यहूदीहरूले अर्को समस्याको पनि सामना गर्नुपर्यो। उनीहरूले मन्दिर बनाएको हेर्न नचाहने शत्रुहरूले उनीहरूलाई वरिपरिबाट घेरेका थिए (एज्रा ४ अध्याय पढ्नुहोस्)। उनीहरूको अवस्थालाई निम्नानुसार वर्णन गर्न सकिन्छ:
१.यहूदीहरू को सङ्ख्या सानो थियो।
२.जिम्मेवारी ठूलो थियो।
३.शत्रुहरू प्रशस्त र भीषण थिए।
सबै कुराहरू उनीहरूको विरोधमा भएको जस्तो देखिन्थ्यो, तर परमेश्वर उनीहरूको विरोधमा हुनुहुन्न थियो। “परमेश्वर हाम्रो ________ हुनुहुन्छ भने को हाम्रो _________ हुन सक्ला?” (रोमी ८:३१)। यो प्रश्नको जवाफ के हो? ______________________ मन्दिरको काम सुरु भयो भनी एज्रा ३ अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौं। मन्दिरको पुनर्निमाणको कामले राम्रै सुरुवात पायो (यो करिब ५३६ ई.पू.को कुरा हो)। मानिसहरूले कडा परिश्रम गरे र अन्ततोगत्वा ज_____ बसालियो (एज्रा ३:१०)। मानिसहरू खुबै रमाए र परमेश्वरको प्रशंसा गरे (एज्रा ३:१०-११) तर केही वृद्ध यहूदीहरू रोए। उनीहरूले राजा सुलेमानद्वारा बनाइएको पहिलो मन्दिरको महिमालाई सम्झे र दोस्रो मन्दिर त्यति महान् हुनेछैन भनी उनीहरूले बुझे (एज्रा ३:१२-१३)।
एज्रा ४ अध्यायमा भएको घटनाको विवरणमा हामी नआइपुग्दासम्म मन्दिरको काम राम्ररी नै चलिरहेको थियो। यहाँ यहूदीहरूको शत्रुहरूले “यहूदाका मानिसहरूको हातहरू कमजोर पारिदिए, र उनीहरूलाई त्यस बनाउने काममा क______ दिए” (एज्रा ४:४) भनी हामी जान्दछौं। यस कुराको कारणले राजा दाराको (अध्याय ६ मा फारसका राजाहरूको सूची हेर्नुहोस्) समयसम्म काम ठप्प भयो। करिब १५ वर्षसम्म मन्दिरमा त्यो भन्दा ज्यादा केही काम गरिएन। सम्पन्न गरिएको कार्य भनेको यहूदीहरूले बसालेका जग मात्र थियो!
अन्ततोगत्वा एज्रा ५:१मा हाम्रा दुई अगमवक्ताहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ, “तब भविष्यवक्ताहरूले अर्थात् भविष्यवक्ता _________ र इद्दोका छोरा ___________ यहूदा र यरूशलेममा भएका यहूदीहरूलाई इस्राएलका ______________ नाममा, जो तिनीहरूमाथि हुनुहुन्थ्यो, भविष्यवाणी गरे”। त्यसबेला ई.पू. ५२० साल थियो। मानिसहरू फेरि आफ्नो काममा फर्कन सकुन् भनी उत्साह दिन परमेश्वरले यी दुई अगमवक्ताहरूलाई उठाउनुभयो! के मानिसहरूले परमेश्वरको मन्दिर बनाउने कार्यलाई सुचारू गरे (एज्रा ५:२)? ________ यी दुई अगमवक्ताकहरूको सहायता र उत्साहको कारणले मानिसहरूले मन्दिर-निर्माणको परियोजना पूरा गर्न र समाप्त गर्न सके (एज्रा ६:१४-१५)। कार्य सुचारू भएको झण्डै चार वर्षपछि करिब ५१६ ई.पू.मा मन्दिर पूरा भयो!
परमेश्वरले यहूदी मानिसहरूसँग उहाँको अगमवक्ता हाग्गै मार्फत कसरी बोल्नुभयो भनी अध्ययन गर्न हामी अब तयार छौं:
हाग्गै—बलिया होऊ र काम गर!
यो पुस्तक अध्ययन गर्दाहुँदि हामीले यो सम्झनु पर्छ कि हाग्गै यहूदीहरूलाई फेरि कार्य सुचारू गर्ने उत्साह दिन परमेश्वरद्वारा प्रयोग गरिएका व्यक्ति थिए! मन्दिरको काम समापन हुनु खाँचो थियो। मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको सन्देश सरल यस्तो थियो, “उठ र निर्माण गर”! परमेश्वरको भवन निर्माण र समापनको त्यस महान् कार्यको निम्ति मानिसहरूलाई उत्तेजित पार्न परमेश्वरले हाग्गैको प्रयोग गर्नुभयो।
हाग्गैलाई परमेश्वरले पठाउनुभएको थियो! अरू अगमवक्ताहरू झैं हाग्गै पनि परमेश्वरको मुखको वाणी थिए। परमेश्वरले उहाँका जनहरूसँग हाग्गैको मुखबाट बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। यो हाग्गैको आफ्नै सन्देश थिएन। यो त परमेश्वरको सन्देश थियो! हामीले यो पुस्तक पढ्दाहुँदि हामीलाई यो अझै स्पष्ट हुन जान्छ। यस पुस्तकमा केवल दुई अध्यायहरू मात्र छन्, तरैपनि निम्न वाक्यांश तपाईंले कतिपटक पढ्न पाउनुहुन्छ भनी हेर्नुहोस्:
“परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ…” अथवा “परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आयो…”
परमेश्वर पहिलो स्थानमा हुनैपर्छ
हाग्गैले मानिसहरूलाई परमेश्वरबाटको यो महत्त्वपूर्ण सन्देश दिए: परमप्रभुलाई पहिलो स्थान देओ! (दोस्रो, तेस्रो, चौथो वा अन्तिम होइन!) तपाईंले परमेश्वरको बेवास्ता गर्नुभयो भने तपाईं समस्यामा हुनुहुनेछ! तपाईंले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुभयो भने उहाँले तपाईंलाई आशिष दिनुहुन्छ (मत्ती ६:३३)। परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूले मन्दिरको पुनर्निमाण गरेको चाहनुहुन्थ्यो! यदि परमेश्वरका मानिसहरूले मन्दिरलाई भग्नावशेषमै रहन दिए भने परमेश्वरले कसरी आशिष दिन सक्नुहुन्छ त?
के यहूदीहरूले परमेश्वरको भवन बनाउने समय आएको छ भनी सोच्दथे (हाग्गै १:२)? _________ के उनीहरू ठीक थिए त?
यहूदीहरूले उनीहरूका आफ्नै प्राथमिकताहरूलाई मिसाएका थिए (हाग्गै १:४ पढ्नुहोस्)। उनीहरूले पहिलो कुराहरूलाई पहिलो स्थानमा राखिरहेका थिएनन्। उनीहरू राम्रो, आरामदायी, सिलिङ ठोकेका घरहरूमा बसिरहेका थिए र परमेश्वरको भवन उजाड परिरहेको थियो!
के परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा नराखेका मानिसहरू साँच्चै आशिषित हुनेछन् (हाग्गै १:६)? ___________ परमेश्वरलाई ठीक स्थान नदिनु भनेको प्वाल परेको थैलीमा पैसा हाल्नुजस्तै हो! यसले कुनै फाइदा दिँदैन!
यहूदीहरूले के गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो (हाग्गै १:८)? “का____ ल्या_____”। के मानिसहरूले हाग्गैले भनेको कुरा माने (हाग्गै १:१२-१५)? _______ के परमेश्वर उनीहरूसँग रहेर उनीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ (हाग्गै १:१३)? ____________ हाग्गैले प्रचार सुरु गरेको तीन हप्तापछि मन्दिर पुनर्निमाणको कार्य सुचारू भयो (हाग्गै १:१लाई १:१५ सँग तुलना गर्नुहोस्)!
हाग्गै २:४ मा हाग्गैले मानिसहरूलाई उत्साहपूर्ण वचनहरू दिइरहेको हामीले भेट्टाउँछौं। “बलिया होऊ!” भन्ने अभिव्यक्ति तपाईंले कतिपटक भेट्टाउन सक्नुहुन्छ? _________
हाग्गैको दिनहरूमा भएका मानिसहरूको निम्ति १ कोरिन्थी १५:५८ राम्रो पद हुन सक्थ्यो र आजका विश्वासीहरूको निम्ति पनि यो सुन्दर पद हो: “सधैंभरि प्रभुको ________ __________ हुँदै जाओ”। आज परमेश्वरले हामीलाई यरूशलेममा उहाँको मन्दिर बनाउने आज्ञा दिनुभएको छैन! तर आज हाम्रो निम्ति परमेश्वरको काम छ। आफ्ना विश्वासीहरूले “सेवाको _______” (एफेसी ४:१२) गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यो भनेको हामीहरू जहाँसुकै (घरमा, स्कूलमा, काममा वा जहाँसुकै) भए तापनि येशू ख्रीष्टको सेवा गर्ने काम हो। परमेश्वरले घरमा तपाईंको निम्ति कुन काम दिनुभएको छ? स्कूलमा? काममा? अन्त जहाँसुकै?
हाग्गैको पुस्तकको दोस्रो अध्यायमा हामीले तीन मन्दिहरूको बारेमा पढ्दछौं:
अब यी तीन मन्दिरहरूलाई तिनीहरूको महानताको क्रम अनुसार तुलना गरौं (ऐतिहासिक क्रम अनुसार होइन):
पहिलो मन्दिर जत्तिकै महान् मन्दिर निर्माण गर्न नसकेकोमा के हाग्गैको दिनहरूमा भएका यहूदीहरू निराश हुनुपर्थ्यो? पर्दैनथियो, उनीहरू निराश भएको परमेश्वरले चाहनुभएन, उनीहरूलाई “ब______ ______” (हाग्गै २:४मा तीन पटक उल्लेख गरिएको) भनी उहाँले आज्ञा गर्नुभयो। यस पुस्तकको सन्देश यही हो: परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राख, बलिया होऊ, परिश्रम गर, तिमीले गर्नुपर्ने कार्यमा तिमीले गर्न सक्ने सर्वोत्तम गर, अनि महान् र महिमित परमेश्वर तिमीलाई आशिष दिन तिम्रै साथमा हुनुहुनेछ (हाग्गै १:१३)!
जकरियाह—साना थोकहरूमा परमेश्वरको आनन्द छ
हाग्गैको सेवकाइ भन्दा करिब दुई महिना पछि जकरियाहको पनि सेवकाइ सुरु भयो (हाग्गै १:१ लाई जकरियाह १:१ सँग तुलना गर्नुहोस्)। यो ५२० ई.पू. साल थियो। जकरियाह यहूदी पूजाहारी थिए। परमेश्वरले यी जवान पूजाहारीलाई लिनुभयो र तिनलाई उहाँको अगमवक्ता बनाउनुभयो!
परमेश्वरले विभिन्न किसिमका मानिसहरूलाई आफ्नो सन्देश प्रस्तुत गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। उदाहरणको निम्ति, नयाँ नियममा पावल र यूहन्नाले उस्तै तरिकाले लेख्दैनथिए। पावलले प्राय:जसो लामा वाक्यहरू लेख्ने गर्दथे। उदाहरणको निम्ति, रोमी १:१-७ पूरै खण्ड एउटै वाक्य हो (एफेसी १:३-१२ सँग पनि तुलना गर्नुहोस्)! अर्कोतर्फ यूहन्नाले एकदम छोटो र सरल वाक्यहरू लेख्दथे (१ यूहन्न ४:१९)। पावल र यूहन्नाका लेख्नेशैली विभिन्न तरिकाहरूका थिए तर परमेश्वरले आफ्नो सन्देश प्रस्तुत गर्न ती दुवै मानिसहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो!
मन्दिर निर्माणको काम सुचारू गर्न र समापन गर्न यहूदीहरूलाई मद्दत दिन परमेश्वरले दुवै जकरियाह र हाग्गैलाई प्रयोग गर्नुभयो। तर यी दुई मानिसहरूको विभिन्न किसिमका लेख्ने शैलीहरू थिए। हाग्गै निकै व्यवहारिक र वास्तविक थिए। उनको सन्देश सरल थियो र बुझ्न निकै सजिलो थियो:
“भवन बनाओ!” (हाग्गै १:८) परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको साथमा छु।” (हाग्गै १:१३) “बलिया होऊ!” (हाग्गै २:४)
अर्को तर्फ, जकरियाको “ध्यान कतै अन्त गइरहेको” थियो। जकरिया दुरदृष्टि राख्ने व्यक्ति थिए। यसको अर्थ हो, उनको पुस्तक दर्शनहरूले भरिएको छ, जसमध्ये केही कुरा बुझ्न कठीन छ। त्यस प्रकारका करिब आठ दर्शनहरू छन् (१-६ अध्यायहरू हेर्नुहोस्)। उदाहरणको निम्ति त्यहाँ रातो घोडामा चढिरहेको मानिसको दर्शन छ (१ अध्याय), चार सिङहरूको दर्शन छ (१ अध्याय), नाप्ने डोरी लिएका मानिसको दर्शन छ (२ अध्याय), सुनको सामदानको दर्शन छ (४ अध्याय), उड्दै गरेको पुस्तकको मुठाको दर्शन छ (५ अध्याय), चारओटा रथहरूको दर्शन छ (६ अध्याय) इत्यादि। धेरै हिसाबमा यो पुस्तक प्रकाशको पुस्तकसँग मिल्दोजुल्दो छ।
परमेश्वरले जकरियाहलाई प्रयोग गर्नुभयो र परमेश्वरले हाग्गैलाई प्रयोग गर्नुभयो। यी मानिसहरू भिन्न किसिमका थिए र उनीहरूले भिन्न शैलीमा लेखे, तर ती दुवैजनाले परमेश्वरकै सन्देश दिए! वास्तवमा, ती दुवै मानिसहरूले उही शब्द लेखे जुन शब्दहरू लेखेको परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो! हाग्गैले स्पष्ट, सरल र केवल दुई अध्याय लामा सन्देशहरू दिएको परमेश्वरले चाहनुभयो! जकरियाहले चाहिँ तिनले देखेका दर्शनहरू लेखेको परमेश्वरले चाहनुभयो र तिनको पुस्तकमा १४ अध्यायहरू छन्! हरेक मानिस भिन्न हुन्छन् र परमेश्वरले भिन्नाभिन्नै मानिसहरूलाई भिन्नाभिन्नै तरिकाहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो कुरा आज पनि सत्य छ। यदि तपाईं विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईं हरेक अरू विश्वासी भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ भनी तपाईंले बुझ्नुपर्छ! तपाईं जस्तै दुरुस्त अरू कोही पनि छैन! र परमेश्वरले तपाईंलाई हरेक प्रकारले विशेष तरिकामा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ!
कामदारहरूका निम्ति अझै उत्साह!
हाग्गैलाई जस्तै परमेश्वरले यहूदीहरूलाई मन्दिरको काममा फर्किने उत्साह दिन जकरियालाई प्रयोग गर्नुभयो। जकरियाह १:३मा परमेश्वरले यहूदीहरूलाई यो कुरा बताउनुभयो: “तिमीहरू मकहाँ फर्क!, सेनाहरूका _____________ भन्नुहुन्छ, र म तिमीहरूकहाँ ___________” परमेश्वरले यसो भन्दैहुनुहुन्थ्यो, “तिमीहरूले मलाई आदर गर्यौ भने, म तिमीहरूलाई आदर गर्नेछु!” (अध्याय ५ हेर्नुहोस्)। हाग्गैको पुस्तकमा जस्तै, परमेश्वरले यहूदीहरूलाई उहाँको आदर गर्न र उहाँलाई पहिलो स्थानमा राख्न आज्ञा दिँदै हुनुहुन्थ्यो।
जकरिया ४:६मा जेरूबाबेलको निम्ति परमेश्वरकहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश थियो: “न ___________, न __________, तर मेरो ___________, सेनाहरूको ____________ भन्नुहुन्छ।” सम्भवत: यस पुस्तकको चाबी पद यही नै हो। निश्चय पनि यहूदीहरूको सानो भागसँग प्रशस्त ताकत वा बल थिएन! उनीहरू सानो र थोरै थिए! तर उनीहरू साना भए तापनि उनीहरूसँग एकजना ठूलो परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यहूदीहरूले सामना गर्नुपरेको तीन समस्याहरू के तपाईंलाई याद छ?
२.जिम्मेवारी ठूलो थियो (मन्दिर निर्माण गर्ने)।
उक्त काम कसरी पूरा गर्न सकिन्थ्यो? जवाफ जकरियाह ४:६ मा पाइन्छ: “मेरो ______________, सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ!” उनीहरूले यो गर्न सक्दैनथे, तर उनीहरूसँग सामर्थी र शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले यो गर्न सक्नुहुन्थ्यो! यो कुरा आजको निम्ति पनि सत्य छ। के तपाईंले कहिल्यै तपाईंको निम्ति साह्रै कठीन देखिने कुनै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ? सम्झना गर्नुहोस्, परमेश्वरको निम्ति समस्या खासै ठूलो छैन! “म सक्दिन, तर उहाँले सक्नुहुन्छ! म अयोग्य छु, तर परेमश्वर योग्य हुनुहुन्छ! मलाई सक्ति दिनुहुने ____________ म सबै कुराहरू गर्न सक्छु” (फिलिप्पी ४:१३)।
अर्को उत्साहजनक शब्द जकरिया ४:९ मा भेट्टाउन सकिन्छ। सम्झना गर्नुहोस्, मन्दिरको जग बसालेको समयदेखि यता करिब १५ वर्षको अन्तराल भइसकेको थियो। त्यस समय यता कुनै काम गरिएको बिरलै मात्र थियो। कार्य गतिरोध अवस्थामा थियो। यहूदीहरूलाई यो ढिलाइ अब समाप्त हुँदैन जस्तो लागेको थियो। के पुनर्निमाणको कार्य फेरि सुचारू होला? के यो कुनै समय सिद्धिएला? जकरियाह ४:९ अनुसार मन्दिरको जग कसले बसालेको हो? ____________________ मन्दिरको काम कसले सिद्ध्याउने छ (सोहि पद)? ____________________ मन्दिर बन्नेछ र जुन मानिसले निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो उसैले त्यो सिद्ध्याउनेछ भनी परमेश्वरले मानिसहरूलाई निश्चयता दिनु भयो!
अन्तत: एउटा प्रश्न सोधियो, “किनभने कसले साना _________ दिनलाई तुच्छ ठानेको छ? (जकरियाह ४:१०)। यहूदीहरूको निम्ति यो दोस्रो मन्दिर सानो र निरर्थक देखिएको थियो। सुलेमानको मन्दिरको तुलनामा यो के___ ______ ________ जस्तो देखिएको थियो (हाग्गै २:३)। तर परमेश्वरको निम्ति यो “केही पनि होइन जस्तो” थिएन, यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा थियो! “थोरै चाहिँ धेरै हो यदि त्यसमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने!” आकारमा र भव्यतामा परमेश्वर प्रभावित हुनुहुन्न। निर्माणकर्ताहरूको हृदय र आत्मिक अवस्थाको बारेमा परमेश्वर बढी सम्बन्धित हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँलाई खुशी पार्न गरिएका “साना कुराहरू” मा आनन्द मनाउनुहुन्छ। हरेक विश्वासहरू “_________ ________ विश्वासयोग्य” (लूका १६:१०) भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ।
मसीह (येशू ख्रीष्ट) को बारेमा अरू लघु अगमवक्ताहरूले भन्दा जकरियाहले धेरै कुराहरू बताएका छन्। यद्यपि जेरूबाबेलको नेतृत्वमा रहेका यहूदीहरूको सानो भाग निकै थोरै थियो, महान् मसीह उनीहरूको जातिबाट आउनुहुनेछ भनी उनीहरूले जानेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। जकरियाहको पुस्तकले समयहरूको मार्गलाई हेर्दछ र येशू ख्रीष्टको पहिलो र दोस्रो दुवै आगमनलाई देख्दछ:
उहाँको पहिलो आगमन
जकरियाहको पुस्तकमा ख्रीष्टको पहिलो आगमनको सबैभन्दा महान् भविष्यवाणि जकरियाह ९:९ मा पाइन्छ। यस पदले यहूदीहरूको राजा येरूशलेममा “नम्र र एउटा ___________ चढेर” (जकरियाह ९:९) आउनुहुनेछ भनी स्पष्टसँग बताएको छ। के यो साँच्चै नै पूरा भयो (मत्ती २१:१-११)? ___________ करिब ५०० वर्षपछाडि येशूले यो भविष्यवाणी उहाँको पहिलो आगमनमा अक्षरश: पूरा गर्नुभयो।
जकरियाह ९:१० ले त्यस समयको बारेमा बताउँदछ जब पृथ्वीमा शा_____ हुनेछ र जब राजाले समुद्रदेखि समुद्रसम्म राज्य गर्नुहुनेछ। यो भविष्यवाणी अहिलेसम्म पूरा भएको छैन, तर येशू संसारमा दोस्रो पटक आउनुहुँदा यो पूरा हुनेछ। जकरियाह १४:४ मा येशू संसारमा फर्किनुहुने कुराको बारेमा हामी जान्दछौं।
जकरियाह १२:९-१४ मा अर्को अचम्मको अगमवाणी भेट्टाइन्छ। येशू संसारमा पहिलो पटक आउनुहुँदा यहूदी मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गरे (यूहन्ना १:११) र उहाँलाई क्रूसमा टांगे (मत्ती २७:२२-२५)। जब येशू दोस्रो पटक संसारमा फर्किनुहुनेछ यहूदी मानिसहरूले “मलाई हेर्नेछन्, जसलाई तिनीहरूले ________________, अनि आफ्नो एकमात्र छोराका निम्ति विलाप गरेझैं उहाँका निम्ति विलाप गर्नेछन्” (जकरियाह १२:१०)। यहूदी मानिसहरू आफूले गरेको कुरामा साह्रै दु:खित हुनेछन् र उनीहरूले पश्चात्ताप गर्नेछन् र ख्रीष्टलाई उनीहरूको मसीह र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नेछन् (रोमी ११:२५-२७ सित तुलना गर्नुहोस्)।
हामीहरू आजका विश्वासीहरू भएको हुनाले, ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति फेरि आउनुहुने समयको निम्ति हामी उहाँको बाटो हेरिरहेका छौं (यूहन्न १४:३)। त्यो बेलाको चाबी प्रश्न सायद यस्तो हुन्छ होला, “मेरो वचनमा तिमीलाई आज्ञा गरेको ती सानो कुराहरूमा के तिमी विश्वासयोग्य भएको छौ?” हामीले त्यस दिन यो सुन्न पाऔं “स्यावास!” भविष्यको प्रकाशमा वर्तमान जीवन जिऔं!
मलाकी—परमेश्वर हाम्रो सर्वोत्तम पाउन योग्यको हुनुहुन्छ
सम्भवत: मलाकी नहेम्याहको समयताका जिएको हुनुपर्छ, अर्थात, तिनले आफ्नो सन्देश हाग्गै र जकरियाहको समयभन्दा करिब एक शताब्दी (१०० वर्ष) पछाडि दिए।
परमेश्वरको प्रेमप्रति मानिसको दु:खद प्रतिकृया
यहूदी मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरको सन्देश निकै सरल थियो, “परमप्रभु भन्नुहुन्छ: मैले तिमीहरूलाई ___________ गरेको छु” (मलाकी १:२)। तर मलाकीको पुस्तकबाट हामी जान्न सक्छौं, यहूदी मानिसहरूले तिनीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम र आदर गरेनन्।
तिनीहरूले उहाँको नामलाई तुच्छ ठाने (मलाकी १:६)।
तिनीहरूले अशुद्ध बलिदान ल्याए (मलाकी १:७-८)।
तिनीहरूले परमेश्वरको नामलाई अपवित्र तुल्याए (मलाकी १:११-१२)।
तिनीहरूले आफ्ना वचनहरूले परमप्रभुलाई थकित पारे (मलाकी २:१७)।
तिनीहरूले परमेश्वरको डर मानेनन् (मलाकी ३:५)।
तिनीहरूले परमेश्वरलाई लुटे (मलाकी ३:८)।
यस पुस्तकको लेखाइको ढाँचा चाखलाग्दो छ। सामान्य बनावट यस्तो छ:
१. परमेश्वरले वक्तव्य दिनुहुन्छ:
“तिमीहरूले आफ्ना वचनहरूले परमप्रभुलाई थकित पारेका छौ” (मलाकी २:१७)।
२. मानिसहरूले उक्त वक्तव्यमाथि प्रश्न गर्छन् र यो कसरी सत्य हुनसक्छ भनी देख्दैनन्:
“कुन कुरामा हामीले उहाँलाई थकित पारेका छौं?”
३. परमेश्वरले तब जवाफ दिनुहुन्छ:
“जब तिमीहरू भन्छौ: ‘हरेक, जसले दुष्ट काम गर्दछ, त्यो परमप्रभुको दृष्टिमा असल ठहर्दछ; अनि उहाँ तिनीहरूसित प्रसन्न हुनुहुन्छ’ अथवा ‘न्याय गर्नुहुने परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ?’ भन्छौ” (मलाकी २:१७)।
मलाकी २:१७ मा तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस समयमा यहूदीहरूको आत्मिक अवस्था खासै राम्रो थिएन! उनीहरू पापको बेहोशीमा मत्त भएका थिए! उनीहरूको आत्मिक अवस्था दुईओटा भ्यागुताहरूको कथा जस्तै थियो। एउटा भ्यागुतालाई उम्लिरहेको पानीको भाँडा भित्र हालियो र त्यसले तातो पानीमा छुनासाथ त्यो बुरुक्कै त्यस भाँडाबाट बाहिर उफ्रियो। अर्को भ्यागुतोलाई मनतातो पानी भएको भाँडामा हालियो। यो पानी बिस्तारै झन्-झन् तातो नहोउञ्जेल तात्तिँदै गयो। पानी झन्-झन् तातो हुँदै गएको बारेमा यो भ्यागुता अचेत रहेको जस्तो देखिएको थियो र यो भ्यागुता उफ्रिँदै-उफ्रिएन। त्यही पानी उसको चिहान बन्यो। दोस्रो भ्यागुता चाहिँ मलाकीको समयतिरका इस्राएलका सन्तान जस्तै हो। परमेश्वरले उनीहरूमा केही दोष भेट्टाउनुहुनेछ भन्ने कुरामा यी मानिसहरू चकित परेका थिए! तिनीहरू आत्मिक रूपमा चेतनाशून्य र आत्मिक रूपमा बहिरा थिए!
परमेश्वर हाम्रो सर्वोत्तम पाउने योग्यको हुनुहुन्छ!
यस समयतिर भएका यहूदीहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो सर्वोत्तम दिइरहेका थिएनन्। वास्तवमा तिनीहरूले उहाँलाई सबैभन्दा खराब कुरा दिइरहेका थिए! तिनीहरूले बलिदान चढाएका पशुहरू कस्ता थिए भन्ने विषयमा ध्यान दिनुहोस् (मलाकी १:८)। तिनीहरूले अन्धा, लङ्गडा र रोगी पशुहरू चढाइरहेका थिए! ती पशुहरू तिनीहरूलाई खासै मन परिरहेको थिएन! बगालको पहिलो फल (सर्वोत्तम) ल्याउनुको सट्टा तिनीहरूले बगालको सबैभन्दा खराब ल्याइरहेका थिए!
आज परमेश्वरले हाम्रो पनि सर्वोत्तम खोज्नुहुन्छ। भजनमा गाए जस्तै, “सर्वोत्तम देऊ मालिकलाई!” निम्न बुँदाहरूमा सल्लाह गर्नुहोस् र कसरी एउटा व्यक्तिले परमप्रभुलाई सर्वोत्तम दिनसक्छ भनी व्याख्या गर्नुहोस्:
क.हामीले लगाउने वस्त्रहरू
ख.हामीले भजन गाउने शैली
ग.हाम्रो खुबी, दान र कुशलताहरूको प्रयोग
घ.प्रार्थनामा हामीले प्रयोग गर्ने शब्दहरू
मलाकीको दिनहरूका सबै यहूदीहरू डरलाग्दो आत्मिक अवस्थामा थिएनन्। त्यहाँ यहूदीहरूको सानो भाग थियो जसले…..
परमप्रभुको डर मान्थे (मलाकी ३:१६)
परमप्रभुको बारेमा अकसर एक-अर्कासँग कुरा गर्दथे (मलाकी ३:१६)
परमेश्वरको नामको वास्ता गर्दथे (मलाकी ३:१६)
यी यहूदीहरू परमेश्वरको निम्ति अति बहूमूल्य थिए (मलाकी ३:१६-१७)। उहाँको आदर गर्नेहरूलाई उहाँले आदर दिनुहुन्छ!
हामीले बारम्बार अध्ययन गरिसक्यौं, अगमवक्ताहरूले उनीहरूका आफ्नै दिनभन्दा टाढो हेरे। उनीहरूले भविष्यमा हेरेर मसीह, येशू ख्रीष्टको आगमनलाई देख्न सक्दथे। मलाकीले मसीहलाई “धार्मिकताको ______” भनी भन्दछन् (मलाकी ४:२)। संसारले पापको “रात” को अनुभव गरिरहेको छ। तर भविष्यमा एउटा दिन आउँदैछ जब सूर्य उदय हुनेछ र नयाँ दिनको बिहानी आउनेछ! येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुहुनेछ र आफ्नो साथमा चङ्गाइ, ज्योति र धार्मिकता ल्याउनुहुनेछ। उहाँले यो “पापको रोगले ग्रस्त” संसारलाई चङ्गाइ गर्नुहुनेछ र पृथ्वी ज्योति र धार्मिकताले भरिनेछ। परमेश्वरको सुत (पुत्र) नै धार्मिकताको सूर्य हुनुहुन्छ!
मलाकी हिब्रू शब्द हो जसको अर्थ “मेरो दूत” हुन्छ। दूत शब्द मलाकीको पुस्तकमा तीन पटक प्रयोग गरिएको छ:
१. मलाकी २:७—पूजाहारीलाई परमप्रभुको दूत भनिएको छ।
२. मलाकी ३:१—बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई “मेरो ________” भनिएको छ (मर्कूस १:२-४ सित तुलना गर्नुहोस्)।
३. मलाकी ३:१—प्रभु येशूलाई “वाचाका ________” भनिएको छ।
मलाकीको पुस्तकले प्रभु येशू ख्रीष्टको दुवै आगमनहरूको अगाडि कुनचाहिँ व्यक्ति आउनेछ भनी हामीलाई बताउँदछ:
१. बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले ख्रीष्टको पहिलो आगमनको निम्ति बाटो तयार पार्नेछन् (मलाकी ३:१ र मर्कूस १:२-४ तुलना गर्नुहोस्)।
२. एलियाले ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको निम्ति बाटो तयार पार्नेछन् (मलाकी ४:५-६ पढ्नुहोस्)।
पुरानो नियमको अन्तिम शब्द
पुरानो नियम कसरी समाप्त हुन्छ भनी ध्यान दिनुहोस्। “नत्र ता म आएर पृथ्वीलाई _____________ (वा श्राप) हिर्काउनेछु” (मलाकी ४:६)। पापको कारणले मानिस श्रापित भएको छ! पुरानो नियम सृष्टिमा सुरु हुन्छ (उत्पत्ति ३) र श्रापमा अन्त हुन्छ (मलाकी ३:६)। नयाँ नियम यस्तो व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ जसले पापको श्रापलाई हटाउनुहुनेछ (मत्ती १:१)। हामी आशिषित होऔं भनेर (गलाती ३:१४) येशू ख्रीष्टले पापको दण्ड लिनुभयो र “_______ निम्ति श्राप” बन्नुभयो (गलाती ३:१३)! मलाकीले तिनको पुस्तक कतिब ४०० ई.पू. तिर लेखे। पुरानो नियममा लेखिएको यो अन्तिम पुस्तक हो। शताब्दिऔं सम्म यहूदीहरूकहाँ परमेश्वरको कुनै वचन वा सन्देश आएन। त्यहाँ कोहि पनि अगमवक्ताहरू थिएनन्। अन्त्यमा, ४०० वर्ष पछाडि परमेश्वरका पुत्र संसारमा आउनुहुँदा परमेश्वरले आफ्नो मौनता तोड्नुभयो! मलाकीले करिब ४०० वर्ष अगाडि अगमवाणी गरेझैं येशूको आगमनको घोषना बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले गरे (मलाकी ३:१)। मलाकीदेखि ख्रीष्टको समयसम्मका यी ४०० वर्षहरूलाई ४०० मौन वर्षहरू पनि भनिन्छ (मलाकीको समयदेखि मत्तिको समयसम्म)।
मलाकीको पुस्तक पश्चात, यहूदीहरूलाई परमेश्वरबाट कुनै सन्देशको खाँचो परेन। उनीहरूलाई आवश्यक परेको सबै कुराहरू उनीहरूसँग थियो। उनीहरूसँग पुरानो नियमका ३७ ओटा परमेश्वरद्वारा निश्वासित पुस्तकहरू थिए। नयाँ नियमको प्रकाश परमेश्वरकै असल समयमा आउनेथियो।
पुरानो नियमको सन्देश: मुक्तिदाता आउँदैहुनुहुन्छ!
नयाँ नियमको समापन (करिब १०० ई.सं.) पछि झण्डै २००० मौन वर्षहरू बितिसके। बाइबल अब पूर्ण छ र आज अगमवक्ताहरूद्वारा बोल्नु परमेश्वरलाई खाँचो छैन। हामीलाई खाँचो पर्ने हरेक कुरा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ र यी खबरहरू पुरानो नियम र नयाँ नियममा पाइन्छ (बाइबलको ६६ ओटा पुस्तकहरू)।
नयाँ नियमको सन्देश: मुक्तिदाता आउनुभएको छ र उहाँ फेरी आउँदैहुनुहुन्छ!
मुक्तिदाताले हाम्रो निम्ति गरिदिनुभएको कार्यमा हामीहरू खुशी मनाउन सक्छौं र मुक्तिदाताको पुनरागमनको बाटो हेर्न सक्छौँ। त्यही समयमा हामीले उहाँलाई हाम्रो सर्वोत्तम दिन सक्छौं!
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:48:522020-04-28 14:35:01हाग्गै, जकरियाह, मलाकी
योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन�...